UJacinda Ardern – umholi onqobe isitha | Scrolla Izindaba
UJacinda Ardern – umholi onqobe isitha
Njengoba abaholi emhlabeni jikelele behluleka ukuvimba ukusabalala kwe-Covid-19, i-New Zealand isheshe yaba yisibonelo ngendlela okufanele kulwisane ngayo igciwane.
UJacinda Ardern, ongundunankulu wezwe, uhole enye yezimpendulo eziphumelele kakhulu emhlabeni kulolu bhubhane. Unconywe ngochwepheshe emhlabeni wonke ngokusebenza ngokushesha nangokuzimisela ukunqanda ukusabalala kwegciwane.
Ngokwesibonelo nje, ngemuva kokuba i-World Health Organization imemezele ukuthi leli gciwane liyisimo esiphuthumayo sezempilo yomphakathi, uhulumeni kaArdern wethula izindlela ezinkulu zokuvimba leli gciwane kanye nohlelo olunzima lokuhlola nokulandela umkhondo.
Ongoti bezempilo bachaze le mpendulo “njengokuchoboza ijika”.
Khonamanjalo, abanye abaholi bomhlaba – okunguDonald Trump noJair Bolsonaro wase-Brazil – baqhubekile nokubukela phansi usongo lwegciwane. Amakhanda abo bawabhekise phansi njengoba amazinga okutheleleka nokushona ekhuphuka.
Mhla zi-8 kuNhlangulana, uArdern wamemezela ngenjabulo ukuthi izwe alisenalo leli gciwane.
Undunankulu uthe, “wenza umdanso omncane” ngesikhathi etshelwa ukuthi oyedwa obesele negciwane useluleme.
Kusukela ngalolo suku i-New Zealand ayikaze iyeke ukuqapha, futhi ngegciwane elibuyayo, izwe lihlala lilungele ukunciphisa ukusabalala kwalo.
NgoMfumfu uhulumeni kaArdern wavala unyaka obabazekayo ngokumangalela umlando wokunqoba ngamalengiso okhethweni lukazwelonke.
Kuze kube namuhla, inani eliphelele labatheleleka ngegciwane e-New Zealand limi ngaphezu nje kwezi-2 100. Bangama-25 kuphela abantu asebebulewe yigciwane.
Njengoba umhlaba wonke ungena onyakeni omusha wesaba amazinga anyukayo e-Covid-19, kanti futhi abantu base-New Zealand bangalindela elinye ihlandla ngaphansi kobuholi obufanele bukaArdern.